ကုတင်အမှတ် ၃၂ မှာ မောင်ဥက္ကာဟာ လူနာလိုလို | ဥက္ကာကိုကို
ကုတင်အမှတ် ၃၂ မှာ မောင်ဥက္ကာဟာ လူနာလိုလို	Posted by oakkarkoko on September 16, 2010
Posted in: ကဗျာ.	3 Comments
အဲယားကွန်းအအေးဓာတ် ၂၇ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်
ဘယ်ဖက် ညာဖက် ဘယ် ညာ ဘယ် ညာ
နာရင်နာတယ်မှတ်ပြီး အောင့်ရင် အောင့်တယ်မှတ်
ရဲဘော်ဇေယျ၊ ရဲဘော်မြတ်သူထွန်း(ဖိုးသီဟ) နှင့် ရဲဘော်ဥက္ကာတို့ ဘူတာရုံစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမှအပြန် အင်းလျားကန်တွင် အမှတ်တရ ဇေဘီအီးသောက်ပြီး မူးနေကြပုံ။
ငါးနှစ်ပတ်လည် မိုက်သွေးကောင်းမှု တန်ပြန်သဘောတရား
အသည်းအဆီဖုံး၍ အနည်းငယ်ခြောက်ကာ ဘေလုံး(spleen) မှာပြည်တည်နာ
မောင်ချိုတေးလာနဲ့ ဦးစူနာကြီးတို့က ဘာသာခြားတွေ
သဘောကောင်းတဲ့ နပ်စ်သူနာပြုက အညာလေသံနဲ့
မျက်နှာကြက်က အိမ်မြှောင်နှစ်ကောင် ဒုက္ခပေးတယ်
အား….. နာတယ်….. !!!!
အဲယားကွန်းအအေးဓာတ် ၂၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကုတင် ၂၇ ကအဖိုးအို အစာမစားနိုင်ဘူး
လူနာစောင့်တွေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ နီယိုကဗျာတွေနဲ့
နီယိုကဗျာတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဟာ လူနာစောင့်တွေနဲ့
သိပ်မိုက်တဲ့ကောင်ရဲ့အတွေးရိုင်းတွေ ခြောက်ယောက်လူနာခန်းထဲ တိုးဝှေ့ကျပ်သိပ်
ဒါက ဂျပန်ဆေးရုံကြီးလား အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီးလား
အသည်းနဲ့ ဘေလုံး(spleen)က ဘယ်ညာဘယ်ညာညှပ်အောင့်တယ်
ကဗျာဆရာ အောင်ရင်ငြိမ်း အိပ်ရေးမ၀ဘူး
ကုတင်အမှတ် ၃၂ မှာ မောင်ဥက္ကာဟာ လူနာယောင်ဆောင်ခဲ့
← မောင်ဥက္ကာနေမကောင်းဘူး	အဲဒီနေ့မှာ →	3 comments on “ကုတင်အမှတ် ၃၂ မှာ မောင်ဥက္ကာဟာ လူနာလိုလို”
seasar on September 20, 2011 at 7:54 am said:
Yone Yone on September 26, 2010 at 2:44 pm said:
နေမြဲ on September 16, 2010 at 1:25 pm said:
ကြွေတဲ့ ကြယ်တွေ ကြီးသတဲ့လား..အဓိပ္ပာယ်မဲ့လိုက်တာ…သိပ်သည်းဆတွေတောင် သွေးကျဲလို့ ..ဘီသွေး လိုရင် ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပါ….